Hwendefa & Bolus
Chinese Chinyakare Mushonga
PaJune 20-22 Jizhong Boka rakapinda VIV Europe 2018 muUtrecht, Netherlands
Musi waJuly 20, 2016
Panguva yaNovember 3, 2017 kusvika Mbudzi 8, 2017, vaongorori kubva kuNational Medicines & Poison Board (NMPB)
Shuanghuanglian Oral Solution Anti-Vaccine Yakanetseka Nyaya
Nechekumashure Kuchengetedzwa panguva yekugadzika kunokonzera kudonha mukugadzirwa kwezai. (Zviuru gumi zvekuisira huku) Kubaya nhomba, kushushikana kwakapetwa (kubaya nhomba, kubata huku), kuderera kwekugadzirwa kweza kunonetsa kudzoka panzvimbo yekutanga. Shuanghuanglian yemuromo mhinduro: Dosi: 7 mabhodhoro pazuva, onc ...
BAODING JIZHONG PHARMACEUTICAL CO., LTD yakapihwa semuenzaniso bhizinesi uye bhizinesi rine hanya muHebei purovhinzi yekuchengetwa kwemhuka uye veterinary sainzi uye hunyanzvi hwekuvandudza.
Kubva muna Gumiguru 26th kusvika 27th, 2020, iyo yechi7 Hebei Kuchengeta mhuka uye Veterinary Science uye Technology Development Musangano ine dingindira re "kudzikamisa kugadzirwa, kumutsidzira indasitiri yemukaka, kubereka kwesainzi, uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza kuchengetedza" kwakaitirwa muShijiazhuan ...
Chikonzero Kuongorora uye Kudzivirira uye Kudzora Kwehuku Chiropa Chirwere
1. Hunhu uye kukosha kwechiropa Hunhu hwehuku yechiropa. Huku chiropa inhengo yakakura kwazvo munhengo, ichiverengera nezve 2% yemuviri. 2. Chiropa chiri muchikamu chezasi chehuku dumbu rehuku, ine kuruboshwe uye kurudyi lobes, iyo r ...
Jizhong Pharmaceutical chitarisiko chakanakisa paRimon Nguruve Musangano
Mumwaka uno wekukura, iyo 9th Liman China Nguruve Musangano uye 2020 World Pig Expo inoitirwa muChongqing, guta rizere nemakomo nenzizi. Kunyangwe zvakakanganiswa nedenda iri, kukura kweMusangano kwakawedzera zvakanyanya, nenhengo mazana masere nemazana masere nemakumi masere nematanhatu semutengesi ...
Nyamavhuvhu 4-6, iyo 18 (2020) CAHE, Jizhong iri kuuya
Nekuda kweiyo COVID-19, iyo 18th (2020) China Animal Husbandry Expo yakadzoserwa kuna Gunyana 4-6. Mushure menguva yezhizha inopisa, mamiriro ekunze mukutanga kwematsutso ainyatso zorodza. Iko kupisa muChangsha hakusati kwadzikira munaGunyana, uye vanoshinga Jizhong vanhu vachasangana newe kuChangsha Inter ...
PaJune 20-22 Jizhong Boka rakapinda VIV Europe 2018 muUtrecht, Netherlands. Iine chinangwa chevashanyi zviuru makumi maviri nezvishanu nemakambani mazana matanhatu anoratidzira, VIV Europe ndiyo chiitiko chepamusoro chemhando yeindasitiri yehutano hwepanyama pasi rose. Panguva imwecheteyo, vamwe vedu vechikwata vakapinda muCPhI China 20 ...
ne admin pane 17-11-08
Munguva yaNovember 3, 2017 kusvika Mbudzi 8, 2017, vaongorori kubva kuNational Medicines & Poison Board (NMPB), Sudan, vakaita GMP kuongorora muBaoding Sunlight Herb Medicament Co., Ltd, imwe yemafekitori ekugadzira eBaoding Jizhong Pharmaceutical Group. Nekuedza kweiyo fekitori yese, ...
ne admin pane 16-07-20
Musi waChikunguru 20, 2016, Mutevedzeri wegurukota rebazi rezvekurima Yu Kangzhen uye Mutevedzeri Director-General weVeterinary Bureau Xiang Chaoyang akashanyira nzvimbo yedu nyowani yekugadzira muQingyuan, Baoding guta. Mutevedzeri wegurukota Yu akataura kuti semumwe wevanogadzira vezvipfuyo, Jizhong Pharmaceut ...
International department rekutengesa maneja: Ray Yang